Sarin'i North and Center - Tononkira Malagasy - serasera.org
Sarin'i North and Center
Mombamomba an'i North and Center | Hampiditra sarin'i North and Center
Ireto avy ny sarin'i North and Center
Nampiditra : tahiana.dafy2015
Daty : 03/02/2018
Momba ny sary : Mike-J, Ras'Lav, Murphy, Patty, Tsiory, Kathia, K.D, fa ny anaran'io rangahy mpitendry valiha io tsy haiko ny anarany. Fa io sary io dia tamin'ny taona 2014 izany hoe 4 taona lasa izany io sary io fa tamin'izany izaho mbola 12 taona.
Momba ny sary : Mike-J, Ras'Lav, Murphy, K.D, Tojo, Niry, Tsiory, Kathia, Randy,... Ireo ihany no fantatro fa tsisy fantatro daholo ireo, io indray dia sary tamin'ny taona 2005 tany Antsonjombe izany hoe 13 taona lasa.
Momba ny sary : Ireto avy izy 7 mianadahy : K.D, Murphy, Ras'Lav, Mike-J, Tsiory, Kathia, Randy. Sary tamin'ny taona 2000 io izany hoe 18 taona taty aoriana izany io sary io satria izaho tamin'izany tsy mbola teraka.